Garaad C/llaahi Soofe oo ka mid ah issimada SSC oo kalsoonidii kala laabtay shirkii Buurawadal. – Radio Daljir
Maarso 9, 2010 12:00 b 0
Garowe, Mar 09 – Qaar ka mid ah salaadiintii dhaqanka ee ka qaybgalay shirkii degmada Buurawadal, ayaa qaadacay shirkaasi iyagoo sheegay in uu ahaa mid meel ka dhac ku ah danaha dadyawga deggan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Garaad C/llaahi Garaad Soofe, oo ka mid ahaa garaadadi dhumucda weyn kulahaa qabanqaabada iyo qabsoomidda shirkaasi, ayaa xalay shir jaraa?id oo uu ku qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ka sheegay in uu kaloosnidii kala laabtay shirkaasi kaddib markii uu dib u dhuuxay natiijadii iyo ga?aamadii ka soo baxay shirkaasi waa sida uu hadalka u dhigaye.
Gaaradku, waxaa uu sheegay fakar iyo wada-tashiyo dheer oo ay yeesheen isaga iyo beesha uu ka soo jeedo kaddib in ay goosteen in ay kala laabteen shirkaasi kalsoonidii ay u hayeen, isagoo intaasi ku daray in ay garawsadeen cawaaqibka mirihii shirkaasi laga dhaxli karo mastaqbalka taas oo ay u dhadhansadeen in uusan hormar u keeni Karin dadyawga deggan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Dhanka kale qaar iyana ka mid ah salaadiintii shirkaasi ka qaybgalay oo haatan ku sugan deegaanka Buurawadal, ayaa la filayaa maanta in ay qabtaan shir saxaafadeed ay kaga hadlayaa arrintaas, kuna beeninayaan hadalka garaadka ee ah in aan dani ku jirin mirihii shirkaasi ka soo baxay.
Sikastaba ha?ahaatee khilaafkaan ayaa soo baxaya xilli dhawaan la filayey in ay shaqo bilaabaan guddiyo shirkaasi gababadiisii lagu magacaay kuwaasi oo loogu magac daray guddiga Khusuusida.
C/fitaax Cumasr Geeddi,